All hell-kpebisiri ike ịkụ ala Telegram !! | Gam akporosis
All hell-kpebisiri ike ịkụ ala Telegram !!
Onyeka Onwenu | | Ngwa gam akporo
Uto nke Telegram n'oge na-adịbeghị anya na-abụ n'ụzọ nkịtị ịbụ ihe karịrị ihe ọzọ na WhatsApp. Ọ bụ onye ahịa nke ndị ọrụ tụkwasịrị obi nyere uru niile enyere ndị ọzọ, gụnyere otu n'ime ngwa ọrụ a na-eji ugbu a, nkata olu.
Mgbe e kpochapụrụ Parler, anya dị na Telegram ugbu a, mgbe ọ bụla akụkọ gachara na Apple na-arụ ọrụ ịhapụ ọrụ Pavel Durov kere. Site na nke a, a ga-amanye ụlọ ọrụ apụl ịdọrọ ngwa ahụ site na Storelọ Ahịa App na nyiwe ya niile.
1 Otu otu gbara akwụkwọ iji wepụ ngwa ahụ
2 Na 2018 ha wepụrụ ya na Storelọ Ahịa App
3 Ihe ize ndụ nke WhatsApp na nkwado ndabere ya
4 Ihe ngosi na-eji sava Google
5 Apple kwesịrị ileghara ọchịchọ a anya
Otu otu gbara akwụkwọ iji wepụ ngwa ahụ
Otu na-enweghị uru etinyego akwụkwọ n'ụlọ ikpe iji rụgide ya gaa na ụlọ ọrụ Silicon Valley maka iwepụ ngwa ahụ na Storelọ Ahịa App. Ha na-eme ihe a niile nyere "ọnụọgụ ndị otu extremist na ngwa ahụ," opekata mpe nke ahụ bụ ihe leta ahụ zigara Washington Post na-emesi obi ike.
Ikpe a megide Apple na-eme maka ihe ndị yiri nke ahụ, ma ndị na-akwado ya na ndị na-emegide Donald Trump achọwo ụzọ ọzọ na ụlọ ahịa Apple iji kpọtụrụ ya. Telegram nọ na-eto eto n’izu ndị a n’abismal, ihe karịrị nde mmadụ iri abụọ na ise ejirila ọrụ ahụ eme ihe.
Na 2018 ha wepụrụ ya na Storelọ Ahịa App
Ugbua na 2018 Telegram Apple n'onwe ya dọrọ aka na ntị na ngwa banyere ọdịnaya na-ekwesịghị ekwesị nke enwere ike ịnweta ndị ọrụ, wepụ ngwa ahụ yana onye ahịa ọzọ, Telegram X. Apple maka oge ahụ ekwughi okwu, n'agbanyeghị na n'oge ahụ enwere ọtụtụ amaghị nke ọma ma a ga-ewepụ onye ahịa ahụ ma ọ bụ na ọ gaghị ewepụ ya na ụlọ ahịa ahụ.
Telegram nwere izo ya ezo na njedebe, ọ bụ site na ọnọdụ otu n'ime ndị na-eji arọ na-ewere nnukwu ọkwa nke ndị ọrụ WhatsApp, ọrụ na-ere ozi nke ndị ọrụ ya niile. WhatsApp yana Nbudata data na Google, e nwere ihe na-emegiderịta onwe anyị.
Ihe ize ndụ nke WhatsApp na nkwado ndabere ya
Ọ maraworị na WhatsApp na-eme nkwado ndabere nke ozi niile emepụtara kwa ụbọchị, a na-echekwa ya na Google Drive yana Google nwere nnweta na nnomi ahụ nke ọ na-ewe data iji zipu mgbasa ozi. WhatsApp enyela ruo 15 Mee iji gosi iwu nzuzo, nke ọ ga-erite uru nke ọma na data nke ndị ọrụ ya niile.
Gbọ elu nke ọtụtụ puku mmadụ si WhatsApp bụ eziokwu, enwere ọtụtụ ndị na-eme ka ndị ọrụ ọhụrụ banye na ikpo okwu mgbe ha natara ọkwa sitere n'aka ndị enyi ha. WhatsApp maara na site na atụmatụ a, ọ ga-efunahụ mmadụ ole na ole na olu ga-eto ka izu na-aga.
Ihe ngosi na-eji sava Google
Ndị ahụ na-eche echiche ịgbanwere Mgbama ugbu a n'ihi oke nchekwa ya emetụ aka ịkọwa na ngwa ahụ na-eji sava Google. E wezụga nke ahụ, ngwa ahụ na-enye nọmba ekwentị anyị, nke na-eme ka ọ ghara ịdị mfe nakwa na kọntaktị gị ọ bụla nwere ya na-enweghị nkwenye gị.
Signal natara onyinye sitere n'aka otu n'ime ndị guzobere WhatsApp. Onye nchoputa a gara ọrụ na Facebook iji weta WhatsApp. Otu afọ mgbe ọ nọrọ na WhatsApp ma mata na ha na-eji data njirimara, ọ hapụrụ ụlọ ọrụ ahụ site na ịga megide ihe ngwa (WhatsApp) bụ mgbe niile. Ihe ịrịba ama na-eto ugbu a na ọnụego dị mma, ọ bụ ezie na ọ naghị eme ya na mba niile.
Apple kwesịrị ileghara ọchịchọ a anya
N'agbanyeghị na a ga-ewepụ Telegram na Storelọ Ahịa App, ụlọ ọrụ Cupertino ga-eleghara ihe ọ bụla chọrọ maka oge ahụ anya nke otu ma ọ bụghị n'ụzọ zuru ezu. Ewezuga ihe ijuanya, ngwa ahụ ga-anọgide na-adị na ụlọ ahịa ngwa ahụ, ebe ọ bụ na ọ naghị emebi iwu ọ bụla.
Anyaụfụ dị n'azụ Telegram dị oke mma, nke mere na ọtụtụ ndị iro na-eto eto mgbe etinyere ngwa nke nnukwu obodo nke ndị ọrụ 525 na-ebudatara onye ahịa ahụ. Ọtụtụ na-akwado mgbaàmà, ndị ọzọ chọrọ iweda Telegram, ma eziokwu naanị nwere otu ụzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » All hell-kpebisiri ike ịkụ ala Telegram !!
Ndị ọrụ gam akporo 11 nwere nnukwu nsogbu na ndị njikwa
Sony Xperia 1 na Xperia 5 na-amalite inweta ihe siri ike gam akporo 11